राजलाई देखेर शिल्पाले आफ्नो होस गुमाएपछी.. - dautarimedia.com
राजलाई देखेर शिल्पाले आफ्नो होस गुमाएपछी..
Prince Rawal July 27, 2021 1 min read
Man Xune Kura ११ मिनेट अगाडि
एजेन्सी । अ श्लि ल फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रालाई जब प्रहरीले शिल्पाको अगाडी ल्याए त्यती बेला बलिउड नायीका शिल्पा सेट्टीले देखाएको प्रतिकृयाले प्रहरी पनि छक्क परे । प्रहरीले राजको व्हाट्सएप च्याट, फोन कल, प्रत्यक्षदर्शीहरुका बयानहरु सबै गोप्य कुरा गोप्य रहेको छ। राजकी श्रीमती अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई २३ जुलाईमा यहि विषयमा प्रहरीले बयान लिएको थियो ।
बयान लिन राजलाई लिएर प्रहरी शिल्पाकै घरमा पुगेको थियो । शुक्रबार, जुलाई २३ मा जब प्रहरी जब जुहू स्थिती शिल्पाको घरमा पुग्यो, राजलाई देखेपछि शिल्पा रिसले आगो भइन् । उनले निकै चिच्याइन् । राजलाई यस्तो सबै किन गर्यौ ? तिम्रो कामले परिवारको बदनामी भयो, हाम्रो ब्यवसायमा घाटा भयो ब्यापारीक सम्झौता सबै रद्ध भए भनेर कराएकी थिइन् ।
शिल्पालाई ६ घण्टा सोधपुछ गरियो र उनको बयान रेकर्ड गरियो। वरिष्ठ अ प रा ध शाखा अधिकृतले भने, ुशिल्पा शेट्टीको यस मु द्दामा कुनै भूमिका छैन। हालसम्म यस घटनामा उनको संलग्नता फेला परेन। अब शिल्पा पक्राउ पर्ने सम्भावना कम भएको छ ।
राज पक्राउ परेपछि निकै चिन्तित भएकी थिइन् शिल्पा । प्रहरीसंगै जव राजलाई पनि उनले देखिन् आफुलाई रोक्न सकिनन् । उसको रिस, आश्चर्य, अचम्म, सबै राजलाई देखेर बाहिर आयो । त्यस दिन राजलाई देखेपछि, उनी आफ्नो सन्तुलन गुमाइन् । धेरै ठूलो आवाजमा राजसंग कराइन् । शिल्पाले राजलाई भनिन् किन उनले यी सबै गरेका थिए।
यस अवधिमा राजले शिल्पासँग कुरा गरे । उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गरिरहेका थिए र उनीहरू विरूद्धमा यस मु द्दाको कुनै आधार नभएको भन्दै थिए। राजले भने कि उनले एरोटिका फिल्महरू बनाएका छन्, पो र्न होइन।
सोधपुछ गर्नु अघि शिल्पा राजसंग असाध्यै रिसाएकी थिइन, तर पछि उनले आफ्नो पतिको पक्ष लिईन् र राजले अ श्ली ल सामग्री बनाउँदैन भनिन्। शिल्पाले बताइन् कि उनको हॉटशट अनुप्रयोगसँग कुनै सरोकार छैन। अ श्ली ल र एरोटिका फरक कुरा हुन् भन्दै प्रहरीलाई बुझाउने कोशिष गरिन् ।
Previous: नेपाली जनतालाई खुशीको खवर, अब विजुलीको विल तिर्न नपर्ने
Next: कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद : छानबिन समितिले देउवालाई बुझायो प्रतिवेदन